Shiinaha Dhammaan taxanaha soo -saaridda mashiinnada Warshadaha iyo Warshadda | KORINTA-Elec
Qalab: Cr12 45# bir
Qalabka wax -ka -qabashada: goynta siligga, ka -shaqaynta saxanka saxanka
Shuruudda saxnaanta: 0.01mm Shuruudaha isbarbar -dhigga Gear: 0.02mm
Daaweynta dusha: madoobaanta, daweyn heer sare ah, daaweynta faaruqinta
Datum Design: datum -ka loo isticmaalo in lagu go'aamiyo booska qodobbada kale, khadadka iyo diyaaradaha sawirka qaybtiisa waxaa lagu magacaabaa datum design.
Halbeegga geeddi -socodka: halbeegga loo adeegsado ka -shaqaynta iyo isu -gaynta qaybaha waxaa lagu magacaabaa halbeegga geeddi -socodka. Xog -ururinta geeddi -socodka waxaa loo qaybin karaa xog ururinta, datumka cabbiraadda iyo datumka meelaynta iyadoo loo eegayo ujeeddooyin kala duwan.
(1) Xog ururinta: datum -ka loo isticmaalo go'aaminta booska qaybo ka mid ah qaybaha ama alaabada inta lagu guda jiro shirka, kaas oo loo yaqaan datum shirka.
(2) Cabbiraadda datum: xogta loo isticmaalo in lagu hubiyo cabbirka iyo meesha dusha mashiinka lagu sameeyo waxaa la yiraahdaa qiyaasidda datum.
(3) Diiwaangelinta meelaynta: xogta loo isticmaalo meelaynta goobta shaqada inta lagu guda jiro farsamaynta, taas oo loo yaqaan meelaynta datum. Sida dusha (ama xarriiqda ama barta) oo ah tixraaca meelaynta, kaliya dusha madhan ee cayriinka ah ayaa lagu dooran karaa habka ugu horreeya, kaas oo la yiraahdo tixraac aan dhab ahayn. Hawl kasta oo ku xigta, dusha mashiinka waxaa loo adeegsan karaa tixraaca meelaynta, oo loo yaqaan tixraac ganaax 
Hore: Adeeg hal joogsi ah oo loogu talagalay dhejiyeyaasha
Xiga: Dhammaan taxanaha biraha shaabadaynta
Alaabta La Soo Bandhigay, Khariidadda bogga, Sheet Birta Stamping Products, Boolal, Qaybaha shaabadaynta jumlada, Dhimashada Magnesium, Guga Saxanka, Aluminium CNC Qaybo Machined, Dhammaan Alaabta